၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန် ၃၀ ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးအခမ်းအနားတွင်ပက်ထရစ်လူမမ်ဘာ၏မိန့်ခွန်း - Afrikhepri Fondation
၁၉၆၀၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးအခမ်းအနားတွင်ပက်ထရစ်လမ်မမ်၏မိန့်ခွန်း
COngolaise et Congolais, ယနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့တိုက်ပွဲဝင်သူများအောင်ပွဲခံ၊ အောင်ပွဲခံ၊ ကွန်ဂိုအစိုးရကိုယ်စားကျွန်ုပ်သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ ငါတို့နှင့်အတူမဆုတ်မနစ်ကြိုးစားတိုက်လှန်ခဲ့ကြသောငါ့သူငယ်ချင်းများ၊ သင်တို့အားလုံးကိုကျွန်ုပ်သည် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန် ၃၀ ရက်ကိုသင်စောင့်ရှောက်မည့်အထင်ကရနေ့ဖြစ်စေရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည်။ ငါတို့ဘက်မှမဆုတ်မနစ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြသောမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်ဇွန် ၃၀ တွင်သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ထာဝရတည်နေမည်ဟူသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသောရက်စွဲတစ်ခုဖြစ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုပါသည်။ သူတို့အပြန်အလှန်အားဖြင့်မိမိတို့၏သားများနှင့်မြေးများနှင့်အတူလွတ်လပ်ရေးရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှု၏ဘ ၀ အခြေအနေကိုပြောပြနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကွန်ဂိုနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးသည်ယနေ့ခေတ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံနှင့်သဘောတူညီမှုတွင်ကြေငြာလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တန်းတူဆက်ဆံသည့်ဖော်ရွေသောနိုင်ငံဖြစ်သော်လည်းအမည်ခံထိုက်သောကွန်ဂိုလူမျိုးများကမူ၎င်းသည် နေ့စဉ်ရုန်းကန်မှု၊ အားတက်သရောနှင့်စံပြဆန်သောရုန်းကန်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းခွန်အား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုများကိုသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခများ၊ အသွေးကိုလည်းမဖြုန်းတီးသောရုန်းကန်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမြင့်မြတ်သော့ရုန်းကန်ခဲ့လို့ပဲ, ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်၏နက်နဲသောပင်လယ်ဂုဏ်ယူနေကြသည်, ထိုအရှက်ကျွန်စနစ်အဆုံးသတ်မရှိမဖြစ်တစ်ရုန်းကန်မျက်ရည်, မီးနှင့်အသွေးခဲ့သည့်ရုန်းကန်ဖြစ်ပါသည် ကျနော်တို့အင်အားခြင်းဖြင့်ချမှတ်ထားခဲ့ကွောငျး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုငါတို့မှတ်ဉာဏ်ထဲကနေသူတို့ကိုမောင်းထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာနေဆဲလည်းလတ်ဆတ်လွန်းနာကျင်ဖြစ်ကြသည်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေး၏ 80 နှစ်ပေါင်းတှငျအဘယျခဲ့သညျ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝစွာစားရန်ကိုအခွင့်, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဝတ်ဆင်သို့မဟုတ်တယ်လျောက်ပတ်စွာကိုယျ့ကိုယျကိုအမျိုးမျိုး, ဒါမှမဟုတ်ချစ်ရတဲ့သတ္တဝါများအဖြစ်ငါတို့သားသမီးပြုစုပျိုးထောင်မပြုခဲ့ရသောလစာလဲလှယ်အတွက်လိုအပ်သည့်အလုပ်ကိုနှောင့်ယှက်လူသိများကြသည်။ ကျနော်တို့အမြီးအမောက်, ကဲ့ရဲ့, ငါတို့ Negroes ကြောင့်ကျနော်တို့နံနက်, မွန်းတည်နှင့်ညဉ့်ကြံ့ကြံ့ခံကြောင်းမှုတ်လူသိများကြသည်။
အဘယ်သူသည်အနက်ရောင်တဆက်ဆက်မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်, "သင်" ဟုပြောသည်ပေမယ့် "သင်" Hon သာအဖြူ reserved ကြောင့်ကြောင့်မေ့လျော့လိမ့်မည်! ကျနော်တို့မျှသာအင်အားအကောင်းဆုံး၏ညာဘက်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေများစွပ်စွဲဥပဒေရေးရာကျမ်း၏နာမ၌သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သညျ။ ကျနော်တို့ကအဖြူတစ်ခုသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ကိုအခြားသူများမှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းနှင့်လူမဆန်စွာအချို့ကိုများအတွက်လက်ခံပေးနိုင်ရန်, ဖြစ်သကဲ့သို့ပညတ္တိကျမ်း, တူညီတဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့ကြောင်းသိသည်။ ကျနော်တို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံအတွင်းရှိ၎င်းတို့၏နိုင်ငံရေးထင်မြင်ချက်များသို့မဟုတ်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ပြည်ပရောက်များအတွက်ပြစ်တင်ရှုတ်ချသူတို့၏အမျိုးအရက်စက်စွာဆင်းရဲခြင်း, သေခြင်းသူ့ဟာသူထက်အမှန်တကယ်ပိုဆိုးသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုမျက်မြင်ပါပြီ။ ကျနော်တို့လူမည်းများအတွက်လူဖြူများနှင့်ပြိုကျ Shanti များအတွက်ခမ်းနားအိမ်၏မြို့ကြီးများရှိခဲ့ကြသည်ကွောငျးကို၎င်းငျး, Black ကရုပ်ရှင်ရုံတွင်သို့မဟုတ်ဒါခေါ် "ဥရောပ" မှာစားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်များတွင်ဝန်ခံခဲ့သည်မဟုတ်ခဲ့, တစ်ဦးက Black သည်သူ၏ဇိမ်ခံအခန်းများတွင်အဖြူများ၏ရှေ့မှောက်၌ထည်စက်မဲ့အတွက်ခရီးထွက်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူသည်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုတွေရဲ့အများအပြားပျက်စီး, သို့မဟုတ်ရက်စက်စွာသူတို့အားဖိနှိပ်မှုနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်တရားမြှတတဲ့စစ်အစိုးရကိုရန်တင်ပြချင်ခဲ့ပါဘူးသူကိုအဘယ်မှာထောင်ထဲပစ်ချခံခဲ့ရဘယ်မှာပစ်ခတ်မှုမေ့လျော့လိမ့်မည်!
ငါ့အလိုရှိသမျှညီအစ်ကို, ညီအစ်မကျနော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေး, ချမ်းသာကြွယ်နှင့်တန်ခိုးအာနုဘော်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်အရာသစ်တစ်ခုရုန်းကန်တစ်သူတော်ကောင်းတရားရုန်းကန်, ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အတူတကွလူမှုရေးတရားကိုတည်စေခြင်းနှင့်လူတိုင်းကသူ့အလုပ်အတွက်တရားမျှတလုပ်ခအားလက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်းသေချာပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကသူလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်အခါအနက်ရောင်လူကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘာကမ္ဘာကြီးကိုပြပါလိမ့်မယ်, ငါတို့သည်ကွန်ဂိုအာဖရိက၏မြေတပြင်လုံး၏ဓါတ်ရောင်ခြည်၏ဗဟိုစေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တပြည်လုံးကိုအမှန်တကယ်မိမိသားသမီးအတှကျအကြိုးကြောင်းသေချာပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အတိတ်၏အပေါငျးတို့သဥပဒေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဖွင့်ခြင်းနှင့်မြင့်မြတ်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသစ်တွေဖြစ်စေမည်။ ထိုလူအပေါင်းတို့ကဤအဘို့, ချစ်လှစွာသော compatriots ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအချိန်ကတရားမျှတသည်နှင့်သောငါတို့ကြီးမားတပ်ဖွဲ့များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားစည်းစိမ်ဥစ္စာအပေါ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလက်ခံအများအပြားနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏အကူအညီများအပေါ်မသာရေတွက်နိုင်သောသေချာပါစေ မဆိုကြင်နာ၏မူဝါဒချမှတ်ရန်မရှာပါလိမ့်မယ်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အစိုးရမှဖန်တီးမည့်ကွန်ဂိုအသစ်သည်ကြွယ်ဝသော၊ လွတ်လပ်ပြီးသာယာဝပြောသောနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့အားလုံးကိုနင့်ကိုတောင်းပန်ခိုင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေရန်မည်သည့်စွန့်လွှတ်မှုမှမရပ်တန့်ပါရန်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုပါသည်။ ကွန်ဂိုနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးသည်အာဖရိကတိုက်တစ်ခုလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အဆုံးအဖြတ်ပေးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာသောအမျိုးသားအစိုးရသည်ဤတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလွတ်လပ်မှုကိုတည်ဆောက်မည့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောအမျိုးသားစီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ရန်ကွန်ဂိုနိုင်ငံသား၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်လေယာဉ်များကိုဂုဏ်ပြုပါ! အသက်ရှည်အာဖရိကလွတ်လပ်ရေးနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအသက်ရှင်! လွတ်လပ်၍ အချုပ်အခြာအာဏာရှိသောကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုအသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်ပါ။ [Wpdiscuz-feedback id =” wepvda4xqz” question =” သင်မည်သို့ထင်သနည်း open =” 0″] [/ wpdiscuz-feedback]
အာဖရိက၏နှလုံးသားကိုယိုယွင်းစေသောသေခြင်း - ကွန်ဂိုမှ Patrice Lumumba ကိုလူမဆန်စွာလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံကိုလိုနီဟောင်း၏ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း
4 €ကနေ 5,92 အသစ်
€ 5,92 ကိုဝယ်ပါ
စက်တင်ဘာလ 17, 2020 3:11 pm တွင်၏အဖြစ်
အမျိုးအစား BLACK ခေါင်းဆောင်များ၏စကား
2025, Kamas ပြည်၌တော်လှန်ရေး
အာဖရိက၏အထွေထွေသမိုင်း (Volume ကို 4)
သင်၏ပြproblemsနာအားလုံးအတွက် ၀ ိညာဉ်ရေးအရဖြေရှင်းချက်ရှိသည် - ဝိန်းဒိုင်ယာ (အသံ)